लकडाउनले सिकाएको वैकल्पिक जीवनशैली आधुनिक जीवन शैलीमा अभ्यस्त मानव जगतका लागि यस अवधिले वैकल्पिक जीवनशैलीको शिक्षा दिएको छ। यस अवधिमा सीमित आवश्यकता पूर्ति गरेर जीवन निर्वाह गर्नु हामी सबैको कर्तव्य भएको छ। मंगलबार, वैशाख २३, २०७७
स्पेनले आपतकाल लम्ब्यायो कोरोना भाइरस संक्रमणसँग जुधिरहेको स्पेनले आपतकाल लम्ब्याउँदै मे ९ सम्म पुर्‍याएको छ। बिहीबार स्पेनका राष्ट्रपतिले राखेको प्रस्ताव सं... बिहीबार, वैशाख ११, २०७७
लकडाउन अवज्ञा गर्नेलाई मोरङको उर्लाबारीमा प्रहरीले लाठी हान्दै भगाए [ भिडियो रिपोर्टे] लकडाउन अवज्ञा गर्नेहरुलाई मोरङको उर्लाबारीमा भाटे कार्वाही सुरु [ भिडियो रिपोर्टे] बुधबार, चैत १२, २०७६
बेलायतमा घरबाट निस्कन रोक, निस्किए जरिवाना बेलायतमा घरबाट निस्कन रोक, निस्किए जरिवाना, एक्सर्साइज, औषधि र खाना किन्न मात्र छुट। मंगलबार, चैत ११, २०७६
लकडाउन के हो? के–के हुन्छ यस्तो अवस्थामा? कोरोन नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि तयारी अगाडि बढाइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले योजना २ अन्तर्गत लकडाउनको विषय राखेको थियो। मन्त्रालयक... शुक्रबार, चैत ७, २०७६
कोरोनाका कारण विश्वका यी १३ क्षेत्रमा ‘लकडाउन’ कोरोना संक्रमणबाट अहिले विश्वका विभिन्न स्थानहरुमा लकडाउन गरिएको छ। चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको भाइरस अहिले विश्वका कयौं स्थानहरुमा... शुक्रबार, चैत ७, २०७६